Home»Entries posted by Tifaftiraha Ciyaaraha
OGOW: Maxaad Kala Socotaa Natiijada Dhaawaca Mane iyo Farxada Manchester United??
By Tifaftiraha Ciyaaraha on October 11, 2017 CIYAARAHA
Weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa la xaqiijiyey inuu muddo lix Isbuuc ah garoomada ka maqnaan doono ka dib markii uu dhaawac cajirka ah kasoo gaaray waajibka xulkiisa qaranka Senegal. 25 sanno jirkaan Sadio Mane ayaa wuxuu haatan seegi doonaa kulanka weyn ee ay Sabtida Liverpool wajaheyso kooxda ay aadka u xifaaltamaan ee Manchester United […]
Danny Rose Oo Kala Doortay Kooxaha Chelsea Iyo Manchester United- Midee Ayuu Ku Biirayaa?
Difaaca Tottenham Hotspur Danny Rose ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda Manchester United, waxaana uu iska diidi doonaa xiisaha kaga imaanaya kooxda Chelsea si uu ugu dhaqaaqo Old Trafford. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaan weli u ciyaarin kooxda Mauricio Pochettino xilli ciyaareedkan sababo la xiriira dhaawac, laakiin Ben Davies oo qaab ciyaareed cajiib […]
Man United oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karaan Grathe Bale
Xidiga reer Wales Grathe Bale kooxdiisa Real Madrid diyaar ayay u tahay inay xagaaga dambe iska iibiso xidigaan hoos u dhaca joogtada ah sameenayo. Bale wuxuu dul qaadka ka lumiyay macalin Zidane iyo madaxweyne Perez waxaana loo sheegay kooxda Man United oo xidigaan xiiso u qabto inay la wareegi karto hadii ay bixiso £89m. El Confidencial […]
Man United waxay walaac ka qabtaa Anthony Martial kooxaha qal qaalada ugu jiraan
By Tifaftiraha Ciyaaraha on October 9, 2017 CIYAARAHA
Cayaaryahanka dhalinta yar Anthony Martial ee garbaha khadka dhexe ka duulo waxaa dabagal xoogan ku hayaan kooxaha Barcelona iyo Arsenal. Man United ayaa walaac xoogan ka qabto qal qaalada ay saxiixa Martial ugu jiraan madaaama xidigaan lagu soo jiidanayo boos joogto ah. Anthony Martial kama mid ahan cayaratooyda macalin Jose Mourinho joogtada u cayaarsiiyo sidaa darteed […]
PSG oo fara kulul ku heyso Man United waxayna ka dooneysaa goolhaye David de Gea
Goolhayaha kooxda Man United David de Gea waxaa haatan bartilmaameed ka dhiganeyso naadiga PSG oo ah koox lacag waali ah suuqa Yurub ku faraqdo. David de Gea haatan wuxuu ka mid yahay goolhayeyaasha caalamka ugu wanaagsan waxayna PSG dooneysaa meelaha ay ka yara dabacsan tahay inay goolhayahan tayada wanaagsan ku xoojiso. PSG xagaagii dhawaa ayay […]
PSG oo diyaarisay €150 million ay Barcelona saxiixa Coutinho kaga dul qaadi laheyd
Kooxda PSG dar darteeda suuqa Yurub ma ahan mid joogsaneyso waxayna isku diyaarineysaa inay bisha Janaayo gacanta kusoo dhigto kubad sameeye Phillippe Coutinho. Sida majalada Sport ay qortay PSG waxay diyaarisay €150 million dalab ah inay Liverpool u gudbiso si ay bisha Janaayo kaga soo qaadato. PSG hadafkeeda wuxuu yahay saxiixa Coutinho inay ku garacaado naadiga […]
Jose Mourinho Oo War Aan Wanaagsaneyn Ka Helay Dhaawaca Paul Pogba, Maxaa Soo Kordhay?
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka cabsaneyso xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba inuu garoomada ka maqnaado muddo labo bilood o dheeraad ah. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa ka baxay kulankii Red Devils ay 3-0 kaga badisay Basel 12kii September, mana uusan ciyaarin shantii kulan ee ugu dambeysay kooxdiisa. Jose Mourinho […]
Mustaqbalka Daley Blind oo mugdi galay kadib markii…………..
By Tifaftiraha Ciyaaraha on October 8, 2017 CIYAARAHA
Laacibka ree Netherlands iyo kooxda Manchester United ee Daley Blind ayaa kusii dhawaanaya inuu isaga dhaqaaqo garoonka Old Trafford, kadib marka uu dib u furmo suuqa soo aadan ee furmi doono bisha January, si uu ugu biiro kooxi uu ka heli karo fursad ka wanaagsan xaalada uu haatan kaga sugan yahay Red Devils. Wargeyska Caanka […]
Jose Mourinho oo isha ku haya inuu lasoo wareego mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Liverpool
Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso xaaladda xiddiga qadka dhexe ee kooxda Liverpool Emre Can, sida laga soo xigtay majaladda The Sun. Man United ayaa qorsheyneysa inay saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Germany ku garaacdo kooxda Juventus. Iyadoo xiddigaani uu diidan yahay inuu qandaraaska u kordhiyo kooxdiisa Liverpool, wuxuuna […]
Nemanja Matic oo markale ku celiyay in Man United tabi doonin Paul Pogba
Kooxda Man United mudo dheer oo aan la cayimin adeega Paul Pogba ma heli doonto waana arin laga doodayo in Jose Mourinho arinkaan u xalin karo. Balse Nemanja Matic ayaa markale ku celiyay in United ay isku filan tahay sidoo kalena shaqadii Pogba kooxda u qaban jiray si wacan loo dabooli doono. Pogba dhaawac dhanka muruqa […]